ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အွန်လိုင်း Dater ဖြစ်လာခြင်း၏ကြဉ်ရှောင်ကြလော့
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဖေဖော်ဝါရီ. 27 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, ရာနှင့်ချီသောလူများ၏ထောင်ပေါင်းများစွာ၏သူတို့ရဲ့ '' ပြည့်စုံသောပွဲစဉ်ရှာတွေ့’ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုမှတဆင့်. နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းထောင်ပေါင်းများစွာသောပိုသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမှစိတ်ပျက်အားလျော့ဖြစ်လာ. အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အတူပြဿနာများရှိသည်သူတွေကိုမှကူညီထောက်ပံ့အချက်တစ်ခုမှာ '' ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အွန်လိုင်း dater '၏ပေါ်ပေါက်ရေးသည်, တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာတွေ့အလေးအနက်ပြုမူသူတစ်ဦးသည်လူတစ်ဦးကိုဖော်ပြရန်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့မဂ္ဂဇင်းအားဖြင့်တီထွင်တဲ့အခေါ်အဝေါ်, ဒါပေမယ့်လည်းအလေးအနက်မဆိုနေ့စွဲနဲ့သို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးက '' ယူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုမပါဘဲ’ နောက်လာမည့်ပွဲစဉ် '' ပိုကောင်းလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား,’
တစ်ဦးကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အွန်လိုင်း dater များသောအားဖြင့်အောက်ပါအလေ့အကျင့်သုံးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပိုင်ဆိုင်:
> အတွင်းပရိုဖိုင်း Relists 24 ဆက်ဆံရေးပြိုကွဲနာရီ.
> ပဲ '' အဆုံးအများအပြားကဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်’ အသစ်ကဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းသို့အချိန်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်.
> အမြဲတမ်းနောက်လာမည့်ပွဲစဉ် '' ပိုကောင်းလိမ့်မည် '' ဟုယုံကြည်သည်.
> အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်နှစ်ကိုတစ်ဦးထက်ပိုသည့်ရက်စွဲရှိသည်လိမ့်မယ်, မတူညီတဲ့လူတွေနဲ့အတူ, တစ်ပါတ်အတွက်တည်ထောင်ထား.
> အလားအလာရှိသောဆက်ဆံရေးအတွက်ဒုက္ခ၏ပထမဦးဆုံးနိမိတ်လက္ခဏာမှာ, အမှုအရာအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဖို့ကိုပြန်သွားဖို့ကိုပယ်ဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်.
> ပရိုဖိုင်ကိုဝှက်ထားနိုင်ပါစေ, ဒါပေမယ့်တွေကိုမဖျက်, တဖြည်းဖြည်းလူတစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့စဉ်အခါ.
> နေ့စွဲမှပြန်လာသောအခါ, ချက်ချင်းအခြားသူများထံမှမက်ဆေ့ခ်ျအသစ်များအတွက် mail ကို check လုပ်ပေးပါတယ်.
ယေဘုယျအားဖြင့်, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကယုံကြည်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ငါပရော်ဖက်ရှင်နယ်အွန်လိုင်း dater ဖြစ်ချင်တယ် '' ဟုမဆိုပါဘူး’ ထို့နောက်တစ်ဦးဘဝရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အဖြစ်ကမှီအောင်လိုက်. ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွေ့အကြုံတွေကို၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်တည်ဆောက်တဲ့အရာတစ်ခုခုသည်. သူ / သူမဘယ်လို '' လွယ်ကူသောအရာကိုမြင်တော်’ ကသစ်တစ်ခုရက်စွဲရသည်နှင့်အပေါ်ယံအားဖြင့်နေ့စဉ်အသစ်မျက်နှာများကိုမိတ်ဆက်သည်. လူတစ်ဦးကသိတယ်မပြုမီ, သူ / သူမရေဒါဇင်ဝက်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် (သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို) တစ်ချိန်တည်းမှာလူ. နေ့စွဲလူတစ်ဦးနှင့်အတူစီစဉ်ပေးသည့်အခါသူ / သူမရက်စွဲမှပြန်ရောက်သည့်အခါလူတစ်ဦးရဲ့ Inbox ထဲမှာအတွက်စောင့်ဆိုင်းနေခြောက်လအလားအလာရှိနေပါသေးသည်. ဤ, တစ်ပြန်တစ်လှည့်, လာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး '' ပိုကောင်းဖြစ်မည်အကြောင်းတစ်မသိစိတ်တစ်ပိုင်းစိတ်နေစိတ်ထားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စတင်,’ ထိုကြောင့်ထိုသူတို့အားပြဿနာများမှတဆင့်ဒုက္ခမယ့်အစားအလုပ်၏ပထမဦးဆုံးနိမိတ်လက္ခဏာမှာဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်ချိန်းတွေ့အတွေ့အကြုံထားခဲ့ဖို့လွယ်၏.
တစ်ဦးကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အွန်လိုင်း dater ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးသီးသန့်ချိန်းတွေ့တဲ့ဆက်ဆံရေးသို့ဝင်သောအခါ deleting ယှဉ်တစ်ဦးရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုလွှဲမည်. မသိစိတ်တစ်ပိုင်း, လူတစ်ဦးအားအမှန်တကယ်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ပေးခြင်းသည်မဟုတ် 100% ဆက်ဆံရေးမှသူတို့ပြန်ရက်စွဲများ၏ဂြိုလ်ရန်မှာလွယ်ကူထွက်ပေါက်လမ်းကြောင်းကရေးဆွဲပြီးကြပြီ.
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အွန်လိုင်း daters, သတိမရမပါဘဲ, ထိုသူတို့သည်မိမိတို့စူးစမ်းရှာဖွေရေးခရီးစဉ်အတွင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိ လာ. လူမျိုးအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းနေကြသည်. ဥပမာအားဖြင့်, ကြေးစားအွန်လိုင်း dater တစ်ချိန်တည်းမှာလူခုနှစ်ရေးသားစေခြင်းငှါ, နောက်ထပ်အသစ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အလားအလာတက်ပြသသည့်အခါ. တစ်ပြန်တစ်လှည့်, ကြေးစားအွန်လိုင်း dater တဦးနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးခွင့်ပြု (သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို) ရုတ်တရက်ရပ်တန့်ဖို့နဲ့အခြားခုနစ်ခုလူမျိုး၏, အဖြေကိုဘဲပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးစွန့်ခွာပြီးအံ့သြ, '' သူ / သူမဘယ်အရပ်မှပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါ?’ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အွန်လိုင်း daters အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဖို့ကိုဆောင် ခဲ့. အခြားပြဿနာစစ်မှန်တဲ့ကတိကဝတ်သူတို့ရဲ့ကင်းမဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ကသုံးစေခြင်းငှါ,, လေးခုသို့မဟုတ် ပို. ပင်ဆက်ဆံရေးကိုတစ်နှစ်ကို. ဆက်ဆံရေးကိုယေဘုယျအားဖြင့်ခဏတာဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အွန်လိုင်း dater တက်စီတန်းအသစ်တစ်ခုရက်စွဲရှိပါတယ် (တစ်စုံတစ်ဦးကအသစ်နှင့်အတူသူ / သူမအွန်လိုင်းတွေ့ဆုံခဲ့) တစ်ပြိုကွဲအတော်ကြာရက်အတွင်း.
ကြေးစားအွန်လိုင်း dater သုံးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုစရိုက်များကိုပိုင်ဆိုင်သူတစ်ဦးသူ / သူမတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အွန်လိုင်း dater ကြောင်းဝန်ခံဖို့လိုမယ်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးကိုပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်. ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့တခြားခြေလှမ်းများ:
> လုံးဝသင့်ပရိုဖိုင်းကိုပယ်ဖျက်(့) ဆက်ဆံရေးသို့ဝင်သည့်အခါ. ပြန်မရှိတယ်ရှာဖွေနေင်, သာရှေ့ဆက်.
> ပြဿနာတွေမှတဆင့်လုပ်ကိုင်ဖို့ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုသင်ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်. ဆက်ဆံရေးအတွက်ကိစ္စရပ်များအားဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းကလူကိုကြီးထွားစေရန်ကူညီပေးသည်ကားအဘယ်သို့. ပြေးဖြေရှင်းချက်မဟုတ်,.
> သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းကိုရပ်တန့်မယ်ဆိုရင်, အေးကြက်ဆင်မလုပ်ကြပါဘူး. သူ / သူမဘာကြောင့်သိတယ်ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးယဉ်ကျေးစွာ note ကိုစေလွှတ်မည်. လူတစ်ဦးလျှင်သင်တို့ကိုဤအတွက် ပို. ရိုသေလေးစားပါလိမ့်မယ်.
> သင်ကြိုက်သောသူတယောက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုကိုရှာပါနှင့်ကပ်. ဒါဟာသင်နှင့်အတူဆက်သွယ်နိုင်သည်အသစ်မည်မျှလူကြည့်ဖို့ဂိမ်းမဟုတ်ပါဘူး. သင်တို့နှင့်အတူအ communicate လူတိုင်းအစစ်အမှန်ခံစားချက်များနှင့်အတူတကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်. သူတို့အပေါ်မှာဦးဆောင်လမ်းပြမထားပါနဲ့.
> တစ်ကြိမ်မှာလူဦးရေအနည်းငယ်နှင့်အတူသာ communicate.
> '' နောက်လာမည့်တပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်၏စိတ်နေစိတ်ထားသို့မကျပါစေနဲ့။’ အဲဒီအစား, သင်နှင့်အတူဖြစ်ကြပြီးသူတို့က 'အကောင်းဆုံး' ဖြစ်သည်ကိုသိရကြလူတစ်ဦးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှု. ထိုအခါကအလုပ်လုပ်စေ.
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အွန်လိုင်း daters သတိမထားမိပဲသူတို့ရဲ့ '' စွန့်စားမှု '၏သင်တန်းကာလအတွင်းကလူများစွာစိတ်ထိခိုက်. သို့သော်ဖြစ်ကောင်းအဘယ်အရာကိုပိုမိုဆိုးရွားင်သူတို့ရေရှည်ဆက်ဆံရေးဟာအောင်မြင်မှုထုတ်လုပ်ရန်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားဖြင့်အလုပ်လုပ်တတ်ဖို့သင်ယူဘယ်တော့မှကြောင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အွန်လိုင်း daters ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိခိုက်ကြောင်း. ကံကောင်းတာက, ပြဌာန်းခွင့်နှင့်အတူ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အွန်လိုင်း daters ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပြီးသူတို့ဆက်ဆံရေးအပေါ်တူညီတဲ့ပြင်းထန်သောအာရုံစိုက်စေသောအခါ (သူတို့ချိန်းတွေ့အွန်လိုင်းနှင့်အတူ ပြု. တူ) ထို့နောက်ဆက်ဆံရေးကိုယေဘုယျအားဖြင့်အံ့သြဖွယ်များနှင့်ကြာမြင့်စွာတည်မြဲအတွေ့အကြုံသို့လှည့်. ထိုအွန်လိုင်းတွေ့ဆုံခဲ့ရသူလူနှစ်ဦးထဲကနေနောက်ထပ်အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုထုတ်လုပ်.
အဘယ်အရာကိုရာသီခွင်သင်္ကေတပြခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲတွင် Do ရန်